Eleanor Columbus – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) သည် IMDb 7.4/10 Metacritic 63% Rotten Tomatoes 82% Google users 96% ဒါရိုက်တာ Chris Columbus ရိုက်ကူးထား၍ J.K. Rowling, Steve Kloves က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Adventure, Family, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ဟယ်ရီဟာ သတိပေးချက်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ဟော့ဝတ်ကို ပြန်လာကာ ကျောင်းကို ခြိမ်းခြောက်တိုက်ခိုက်နေမှုနဲ့ သူ့နောက်ကို လိုက်ခံခြောက်လှန့်နေတဲ့အသံကို လိုက်လံရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပုံကို ဇာတ်လမ်းမှာ ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ….. Reviewed by Win Kyaw ...
IMDB: 7.4/10 483,305 votes
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) Harry Potter ရဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်ကားပါ။ မှော်ကျောင်းတော်ကြီးစီရောက်လာတဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
IMDB: 7.6/10 559,469 votes